Warbixin Ay Shabakada Deeyoo Kasoo Saartay Xubintii Isbarbardhiga Fanka Kadib Fariimo Nasoo Gaaray
Anigoo ku hadlaya magaca dhamaan inta ku hoos jirta dallada ama kooxda Deeyoo Team waxaan jecleystay inaan wax yar ka qoro qoraalkeenii ugu danbeeyay ee isbarbardhiga heesaha oo aan kusoo qaadanay laba hees oo kala amaanayay Somaliland iyo Puntland.
Heesahaan waxaa kala qaadaya farxiya Fiska oo qaadeysa heesta KU DAYASHAA MUDANTIHIIN SOMALILAND. halka uu Zaki Hanad qaadayo heesta PUNTLAND.
Saaxiibadeena qaaliga ahow waxaa dhacday in dad badani qalad u fahmeen ama u fasirteen ujeedada aan ka lahayn isbarbardhigaas oo dadka qaarkii u fasirteen mid siyaasadeed.
Shabakadan Deeyoo oo ka madax banaan wax walba oo siyaasad quseeyo ha ahaadaan xisbiyo siyaasadeed, madax urur, iyo weliba kala faquuqid dhamaan bulsha weynta ku hadasha afka Soomaaliga.
Anaga oo hadafkeenu sidaa yahay ayaa hadana waxaa meesha ka maqneyn oo nagusoo milma mar marka qaar heeso ka hadlaya deegaano ama amaanaya shaqsiyaad oo aan sii deyno si inta ku qanacsan ama jecel ugu raaxeystaan inta kalena ay dookhooda xor u yihiin.
Waxaan is barbardhignay laba hees oo ujeedadeenu ahayd in dadku ku qiimeeyaan ereyada, laxanka, musiga iyo codadka intaba maadaama ay labaduba ka hadlayaan meel ay dadkeenuaan degaan, iyo in dadku maqlaan oo ku raaxeystaan waxa deegaan waliba ku wanaagsanyahay laakiin ma aha in ay dadku siyaasad iyo qabiil dhex dabaashaan.
Heesuhu siyaasad kama marna qudhoodu balse anagu dan gooni ah oo siyaasad ama qabiil amaba deegaan kama lihin sida aan ku helno ayaana idinkuugu soo bandhignaa, waa wixii positiv ah oo aan aflagaado iyo dhibaato u geysaneyn dad kale, balse wixii negativ ah ama lagu xumeynayo, laguna jaa'ifeynayo walaalo kale raali kama noqoneyno mana ogolaaneyno.
Marka Somali hadii ay mid noqoneyso ama ay 10 noqoneyso iyaga ayey ka go'daa. laakiin anagu waxaan aaminsanahay in aan Boorama, Hargeysa, Garowe, Las Caanood, Galkacyo, Cadaado, Beledweyn, Jowhar, Muqdisho, Marka, Baydhabo, Kismaayo, Garbahaarey iyo Afmadow meeshi aan tago ay joogaan walaalo Soomaali ah magaca ay doonaan iyo calanka ay doonaan ha haystaan.
Xubinteena isbarbardhiga fanka waa mid todobaadle ah oo soconeysa ee fadlan iska daaya fasiraada qaladka ah iyo in dadka qaab kale loo tuso oo hadana loo badalo ujeedadii aan ka lahayn, waana ka raali gelineynaa hadii ay dad qalad u arkeen anagoo xitaa og inay qalad naga fahmeen.
Diyaar ayaan u nahay mar walba Dhaliil, amaan, talo, iyo fikrado kala duwan in aan idinka helno waxaadna noogu soo hagaajisaan emeiladeena ko qorona qeybta kore ee bog walba oo ah Contacts ama facebook Deeyoo Musikk.
Asc.Anigoo ku hadlaya magaca dhamaan inta ku hoos jirta dallada ama kooxda Deeyoo Team waxaan jecleystay inaan wax yar ka qoro qoraalkeenii ugu danbeeyay ee isbarbardhiga heesaha oo aan kusoo qaadanay laba hees oo kala amaanayay Somaliland iyo Puntland.
Saaxiibadeena qaaliga ahow waxaa dhacday in dad badani qalad u fahmeen ama u fasirteen ujeedada aan ka lahayn isbarbardhigaas oo dadka qaarkii u fasirteen mid siyaasadeed.Shabakadan Deeyoo oo ka madax banaan wax walba oo siyaasad quseeyo ha ahaadaan xisbiyo siyaasadeed, madax urur, iyo weliba kala faquuqid dhamaan bulsha weynta ku hadasha afka Soomaaliga.